မွတ်ဆလင်များ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း။ | မျိုးမြန်မာ
မွတ်ဆလင်များ အတွက် ၀မ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်း။
Posted by myomyanmar on June 4, 2014
Posted in: အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: မွတ်စလင်, သတင်းကောင်း, Good News.	Leaveacomment
Islam သည် မိုဟာမက်ကြီးသေသွားသည့်အခါ (နောင်အခါ) မွတ်ဆလင် ၇၃ ဂိုဏ်းကွဲလိမ့်မည်။ ထို ၇၃ ဂိုဏ်းမှ မှန်ကန်သော ဂိုဏ်းတစ်ခုသာလျှင် ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီး ကျန် ၇၂ မျိုးသော မွတ်ဆလင် ဂိုဏ်းအားလုံးမှာ ငရဲသို့ လားရပေမည်။
မွတ်ဆလင်များ တခြားဘာသာတွေကို ဆဲနေမည့်အစား၊ Insult, Debate လုပ်နေမည့်အစား မွတ်ဆလင် အချင်းချင်း ဘယ်ဂိုဏ်း မှန်လဲဆိုတာ Debate လုပ်ပါလား။ အရမ်းကို သိသင့်ပါတယ်။ မိုဟာမက် လျှိ့ ဝှက်သွားခဲ့တဲ့ မှန်ကန်တဲ့ မွတ်ဆလင်ဂိုဏ်ခွဲ ဆိုတာ၊ ဆွန်နီလား၊ ရှီးယိုက်လား၊ အာမက်ဒီ လား၊ သူတို့ ကနေ ထပ်ခွဲသွားတဲ့ ဂိုဏ်းမြှောင် အသေးလေး လား။
မွတ်ဆလင်များ Debate လုပ်ကြပါ။ မှန်ကန်တဲ့ မွတ်ဆလင်ဂိုဏ်ခွဲ ဆိုတာ၊ Buddha ဘာသာကို ဆဲနေမယ့် အစား၊
မွတ်ဆလင်များတွင် ဆွန်နီ၊ ရှီးယိုက်၊ စသည်ဖြင့် ဂိုဏ်းများ မြောက်မြား စွာ ကွဲ နေရာတွင်၊ ထို ရာနဲ့ချီသော ကွဲနေသော၊ သတ်နေသော ဂိုဏ်းကွဲများထဲမှ ဂိုဏ်းကွဲ တစ်ခုသာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်မွတ်ဆလင် အားလုံးမှာ ငရဲကို လားရမည်ဖြစ်ကြောင်း မိုဟာမက်ကြီးက မသေခင်ပြောခဲ့ပေသည်။ မည်သည့် ဂိုဏ်းက ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်မည် ကို မူ အထူးလျှိ့ ဝှက်ချက် အနေနေဲ့ မပြောခဲ့ပေ။
အသေးစိတ်မှာ ..တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့မဆိုင်ပဲ ဂိုဏ်းကွဲ ကလေး တစ်ခုမှ မွတ်ဆလင် ဂိုဏ်းသားများ သာ ကောင်းကင်ဘုံကို ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန် မွတ်ဆလင် ဂိုဏ်း အားလုံးမှ မွတ်ဆလင်များ အားလုံး ငရဲ သို့ လားရမည်ဖြစ်သည်။
မွတ်ဆလင် တစ်ဦးချင်းအနေနဲ့Allah ကို ဘယ်လောက်ချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကိုရန်ကို အာဂုံဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ Mecca သို့ အခေါက် ၁၀၀ သွားသည်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးချင်း ဘယ်လောက် မွတ်ဆလင်ပီသသည် ဖြစ်စေ ၊ ထိုသူ အားလုံးတို့ သည် မှန်ကန်သောဂိုဏ်းကွဲ လေးတစ်ခုမှ မွတ်ဆလင်များ မဟုတ်ပါက ထိုသူ အားလုံး ငရဲသို့ သွားရမည်ဖြစ်သည်။ မိုဟာမက်ကိုချစ်သူ၊ အာလာကို ချစ်သူ၊ ကိုရန်ကိုချစ်သူ စသည်ဖြင့် လုံဝမဆိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မွတ်ဆလင်ဂိုဏ်းအားလုံးသည် ကိုရန်ကျမ်းတစ်အုပ်ထဲကိုင်ပြီး အာလာ၊မိုဟာမက် စသည်တို့ ကို အားလုံးက ကိုးကွယ်ကြသူမျာ ချည်းဖြစ်သောကြောင့်..
ထို သို့ ကိုးကွယ်သော်လည်း အဲဒါတွေနဲ့ မဆိုင် ပဲ သူတို့ သည်ဘယ်ဂိုဏ်းက မွတ်ဆလင်များဖြစ်သည် ဆို သည်နဲ့ ပဲ ဆိုင်လေသည်။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ တစ်ခုသာရှိသည်၊ ထိုအရာမှာ Allah အတွက် အသက်အသေခံ၊ အသက်စွန့် ကာ မွတ်ဆလင် မဟုတ်သူများကိုသတ်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ထိုသို့Allah အတွက် အသက်အသေခံသော ( အသေခံဗုံးခွဲသမား) မွတ်ဆလင်ဆိုရင်တေ့ မည်သည့်ဂိုဏ်း ဖြစ်စေ ချွင်းချက်အနေနဲ့ အာလာ ကြီး က ကောင်းကင်ဘုံတွင်လက်ခံ ပေသည်။
ထိုကြောင့် မည်သည့်ဂိုဏ်းက မှန်သည်ကို မသိသော မွတ်ဆလင်များ က ထိုနည်းလမ်းကို သုံးပေသည်။ ထို နည်းလမ်းသည်စိတ်ချရသည်.။ဆွန်နီဖြစ်စေ၊ ရှီးယိုက်ဖြစ်စေ ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့ သေချာသည်။ သို့ သော် ယခုချက်ချင်း သေရမည်။ယနေ့ ခေတ်စားနေသော အသေခံ ဗုံးခွဲ သမားများဧ။် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်ရန်သေချာပြီး အပျိုစင် ၇၂ယောက် +လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက်နဲ့ Fucking လုပ်ရဖို့ ဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီရူးသွပ်မှု ရဲ့ ဟာကွက် ကရှိနေသည်။
မွတ်ဆလင်က ခရစ်ယာန် ကိုသတ်ရင်တော့ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း ဆွန်နီနဲ့ရှီးယိုက် နဲ့ အချင်းချင်းသတ်ပြီး အကုန်လုံးသေကုန်ရင်ရော ဘယ်သူက ကောင်းကင်ဘုံရောက် မှာလဲ။ ဆွန်နီ မွတ်ဆလင်က ကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာလား၊ ရှီးယိုက် မွတ်ဆလင်က ကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဆွန်နီမွတ်ဆလင်က ရှီးယိုက် မွတ်ဆလင်ကို သတ်ရင် သတ်တဲ့ ဆွန်နီမွတ်ဆလင်က ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီး၊ ရှီးယိုက် မွတ်ဆလင်က ငရဲကျမှာလား၊ဒါမှမဟုတ် အသတ်ခံရတဲ့ ရှီယိုက် မွတ်ဆလင်က ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်ပြီး သတ်တဲ့ ဆွန်နီ မွတ်ဆလင်က ငရဲကျမှာလား။ အားလုံးငရဲကျဖို့ က ၉၉% ရှိသည်။
အင်မတန်မှ ရှင်းသော၊ အင်မတန်မှ ကြောက်စရာကောင်းသော မွတ်ဆလင်များဧ။် ဘ၀ပင်ဖြစ်သည်၊ သူတို့ ကိုယ်တိုင် မွတ်ဆလင်ပီသအောင်နေပါလျက် ကောင်းကင်ဘုံရောက်မည်မှာ လုံးဝမသေချာပေ၊
မုတ်ဆိတ်မွေးတကားကား၊ မယား အများအပြား နဲ့ဝတ်ရုံဖြူ ၀တ်ကာ၊ သွားနေသော်လည်း
ချဲထိုးသကဲ့ သို့ မိမိ အနာဂတ်ကို လောင်းကြေးထပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အကွက် ၁၀၀ မှာ ၁ ကွက်ပဲ ပေါက်မဲပါသည်။ ကျန်အကွက် ၉၉ ကွက် မှာ ငရဲသို့ သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ကဲ အသင်မွတ်ဆလင် သင် ဘယ်အကွက် ထိုးမှာ လဲ ဆွန်နီလား၊ ရှီးယိုက်လား၊ အာမက်ဒီ လား၊သေချာ သည်က တော့ သင်ဘယ်လောက် ကျင့်ကြံအားထုတ်သည်ဖြစ်စေ မိုဟာမက် အမိန့် အရ အသင် ငရဲ ကျဖို့၉၉% သေချာနေပါပြီ။
မွတ်ဆလင် ဆို လို့ က တော့ မွေးလာကတည်းက ၊ ငရဲ ကျဖို့၉၉% ရှိနေသည် ၊ အလ္လာဘုံမှာ Fucking ပေးရဖို့ chance က ၁%ပဲရှိတယ်။ မိုဟာမက်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာနော်။